Android အတွက် Himawari Apk ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ [ဂိမ်းအသစ်] - Luso Gamer
Android အတွက် Himawari Apk ဒေါင်းလုဒ်ကို ထိပါ [ဂိမ်းအသစ်]
ဇြန္လ 14, 2022 by John Smith
မတူညီသော anime ဇာတ်ကောင်များ လက်လှမ်းမီနိုင်သည့် သရုပ်ဖော်ကမ္ဘာတွင် နေထိုင်ရန် သင်ကြိုးစားဖူးပါသလား။ မဟုတ်ပါက Touch Himawari ကို ထည့်သွင်းသည့် တကယ့် anime လောကတွင် နေထိုင်ရန် အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဟု သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
apk ကို download လုပ်ပါ
ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးနေသော ဂိမ်းအက်ပလီကေးရှင်းသည် ဆက်စပ်မှုသက်သက်ဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကစားအခန်းကဏ္။. ဂိမ်းကစားသူများသည် ဂိမ်းအတွင်း တိုက်ရိုက်ပါဝင်မှုကို ပြသခြင်းကို နှစ်သက်နိုင်သည့်နေရာ။ နေ့နှင့်ည အပါအဝင် အခြေအနေကို ထိန်းချုပ်ရန် လက်လှမ်းမီနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများကို နှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်သည် ဂိမ်းကစားသူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ကြောင်း သတိရပါ။ အချို့အဆင့်များတွင် ကစားသမားများသည် ရွေးချယ်ရန် ဤကွဲပြားခြားနားသော ရွေးချယ်မှုများကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ပေးထားသည့်ရွေးချယ်စရာများကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဇာတ်လမ်းပုံစံဖြင့် မတူညီသောရလဒ်များကို ထင်ဟပ်စေမည်ဖြစ်သည်။
Touch Himawari Apk ဆိုတာဘာလဲ
Touch Himawari Android သည် android simulation-based gaming application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကစားသမားများသည် တကယ့် anime လောကတွင် နေထိုင်ပျော်မွေ့နိုင်သည့် နေရာ။ စိတ်ပါဝင်စားမှုကို အာရုံစူးစိုက်သော ကျပန်းပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပင် စကားစမြည်ပြောပါ။ ဇာတ်ကောင်တစ်ခုစီကို ကျပန်းသူငယ်ချင်းအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
လက်လှမ်းမီနိုင်သော ဇာတ်ကောင်အားလုံးသည် လှပသော မိန်းကလေးများဟု ယူဆကြသည်။ အစပိုင်းတွင် ဂိမ်းကစားသူများသည် ထိုမိန်းကလေးများကို သူငယ်ချင်းအဖြစ် မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သင်သည် ထိုမိန်းကလေးများနှင့် စတင်ပရောပရည်လုပ်ကာ chat မှတဆင့် အသုံးချရန် ကြိုးစားလာသည်။
ပုံမှန်စကားပြောဆိုခြင်းက နားလည်မှုကောင်းအောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ chatting သည်ပင်လျှင် သင်တစ်ခါမှမစူးစမ်းဖူးသည့် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းအသစ်များကို ရှာဖွေရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။ စကားပြောဆိုခြင်းနှင့် စိတ်ပါဝင်စားမှုပြသခြင်းမှာ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အတော်လေးကွာခြားသည်။
ယခုအခါ မတူညီသောရွေးချယ်မှုများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ဂိမ်းကစားသူသည် အခြေအနေကို ကိုင်တွယ်ပုံအပေါ် မူတည်ပါသည်။ အချိန်ကို မြန်မြန်ဖြတ်လိုသူများ။ နေ့ရောညပါ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ရွေ့လျားရန်အတွက် နာရီကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရွေးချယ်ရပါမည်။ ဖြတ်သန်းလာတဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ သင် ပိုအောင်မြင်လေပါပဲ။
အမည် Himawari ကိုထိပါ။
အရွယ် 62.4 ကို MB
package အမည် uchu.touchhimawari
လိုအပ်သော Android 5.0 နှင့် Plus အား
အမျိုးအစား အားကစားပြိုင်ပွဲ - ခြင်း simulation
ဂိမ်းကစားသူများသည် သူငယ်ချင်းအသစ်များ ရှာဖွေခြင်း အခြေအနေကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ သူငယ်ချင်းများကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် ၎င်းတို့နှင့် စကားပြောခြင်းအပြင် လက်လှမ်းမီနိုင်သော အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များစွာလည်း ရှိသေးသည်။ ၎င်းတို့တွင် စိတ်ကြိုက်ဆက်တင်၊ မီနီဂိမ်းများနှင့် တိုက်ရိုက်ချတ်ရွေးချယ်မှုတို့ ပါဝင်သည်။
မီနီဂိမ်းများကို အတွင်းမှ သက်သက် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ မီနီဂိမ်းများကိုကစားပြီး အဆင့်များကိုအနိုင်ရရှိခြင်းဖြင့် ခရက်ဒစ်များရရှိရန် ကူညီပေးပါမည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရရှိထားသော ခရက်ဒစ်များသည် မတူညီသော ကျွမ်းကျင်သော အင်္ဂါရပ်များကို လော့ခ်ဖွင့်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အဆင့်များနှင့် ဇာတ်ကောင်အသစ်များ ပါဝင်သည်။
Blocks Game ကိုလည်း ကစားလို့ ရပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဂိမ်းကိုစတင်ခြင်းသည် အားလပ်ချိန်များကို ပျော်ရွှင်စေရန် ကူညီပေးပါမည်။ စတိုးဆိုင်ရွေးချယ်ခွင့်သည် လက်ရှိပိတ်မုဒ်တွင် ရှိနေသည်။ Sword Quest ဂိမ်းသည် အခမဲ့ကစားနိုင်ပြီး ဇာတ်လမ်းအခြေခံဂိမ်းကို နှစ်သက်သည်။
ဆက်တင်ရွေးချယ်ခွင့်ကိုလည်း အတွင်းတွင် အမွေဆက်ခံထားသည်။ သီးခြားရွေးချယ်ခွင့်ကို နှိပ်ရုံဖြင့် မတူညီသော ဂိမ်းအသံများကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကို ခံစားလိုက်ပါ။ ဓာတ်ပုံအသစ်များရိုက်ကူးရန် စိတ်ဝင်စားပါက ကင်မရာကိုအသုံးပြု၍ ဂိမ်းကစားခြင်းအတွင်း၌လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ဖမ်းယူထားသော ဓါတ်ပုံများကို Picture Folder အတွင်း ပြသပါမည်။ ဖိုင်တွဲကိုဖွင့်ပြီး ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံများကို စူးစမ်းလေ့လာကြည့်ပါ။ ယခုအချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်ပြဿနာ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာများကိုမျှ ရှာမတွေ့နိုင်သေးပါ။ ထို့ကြောင့် သင်သည် Touch Himawari Download ကို သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ဤဂိမ်းအသစ်ကို ကစားရန် စိတ်ဝင်စားပါသည်။
ဂိမ်းကိုထည့်သွင်းခြင်းသည် မတူညီသောအခွင့်အရေးများကို ပေးဆောင်သည်။
အင်္ဂါရပ်များနှင့် ရွေးချယ်မှုများကို လေ့လာရန်။
မတူညီသော မီနီဂိမ်းများကို ကစားရန် လက်လှမ်းမီနိုင်သည် ။
မတူညီသော anime ဇာတ်ကောင်များကို ထည့်သွင်းထားသည်။
anime ဇာတ်ကောင်အားလုံးသည် အမျိုးသမီးဖြစ်သည်။
Touch Himawari ဂိမ်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နည်း
ဂိမ်းအပလီကေးရှင်းကို တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းဆီသို့ တိုက်ရိုက်မသွားရန်။ ကနဦးအဆင့်မှာ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနေပြီး android အသုံးပြုသူများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်သောနှင့် မူရင်း Apk ဖိုင်များကိုသာ ပေးဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဂိမ်းကစားသူ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအား သေချာစေရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသော စမတ်ဖုန်းများတွင် Apk ကို ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကို ထည့်သွင်းပြီးနောက်တွင် ထည့်သွင်းရန် ချောမွေ့ပြီး လုံခြုံကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အောက်ဖော်ပြပါလင့်ခ်ကို နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် သင့်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းကို အလိုအလျောက် စတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Apk ကို Install လုပ်ခြင်းဟာလုံခြုံမှုရှိရဲ့လား
ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည့် ဤအထူးဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်သက်ဖြစ်သည်။ ဒေါင်းလုဒ်အပိုင်းအတွင်း ဂိမ်းကို မကမ်းလှမ်းမီပင်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းကို မတူညီသော စက်များတွင် ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကို install လုပ်ပြီးတဲ့အခါ ချောမွေ့ပြီး ကစားလို့ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် အခြားသော simulation ဂိမ်းများစွာကို ကမ်းလှမ်းထားပြီးဖြစ်သည်။ ထိုအခြားသော ကစားနည်းများကို ကစားရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပေးထားသော လင့်ခ်များကို လိုက်နာပါ။ အဲဒါတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Truck Simulator Vietnam Apk နှင့် ascrowrowded APK.
ထို့ကြောင့် သင်သည် အလားတူဂိမ်းများကို ကစားရန် ငြီးငွေ့နေပြီး anime ကမ္ဘာအသစ်ကို ရှာဖွေရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အဆိုပါ android အသုံးပြုသူများသည် Touch Himawari 2022 ကို ဤနေရာမှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရပါမည်။ ပြီးတော့ anime simulation ဂိမ်းကို အခမဲ့ စူးစမ်းခံစားလိုက်ပါ။
ဒေါင်းလုပ် Link ကို
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား ခြင်း simulation, အားကစားပြိုင်ပွဲ Tags: RPG ဂိမ်း, Himawari Android ကိုထိပါ။, Himawari Apk ကိုနှိပ်ပါ။, Himawari Download ကိုနှိပ်ပါ။, Himawari ဂိမ်းကိုထိပါ။ post navigation
Old Roll Apk ကို Android အတွက် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ [Camera App]
Android အတွက် Macro Extreme Apk ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ [နောက်ဆုံးပေါ်ကိရိယာ]